ईसेवाले जनता झुक्याएको पोल खुलेपछि सामाजिक संजालमा ट्रेन्ड- ‘ब्यान इसेवा’ ! – Kalopati
काठमाडौँ । केहि समय अगाडी मालिकले एक मिडिया नै ह्याक गर्न खोजेको प्रकरणपछि एकाएक झन् बढी विवादमा आएको इसेवा पुन: विवादमा आएको छ । जनता झुक्याउने र आफ्नालाई उपहार दिने गरेको पोल खुलेपछि सामाजिक संजालमा #BanEsewa ट्रेन्ड नै चलिरहेको छ । डिजिटल मनि वालेटको सुबिधा दिदै आएको इ-सेवा ले विभिन्न अफर लिएर आउने गरेको छ । जसमध्ये अधिकांस विवादित छन् भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला यसपालीको अफर भने बढी नै विवादित बनेको पाइएको छ । पछिल्लो समय “५० मा आइफोन प्रो ” अफरलाइ लिएर इसेवा विवादमा परेको देखिएको छ।
किन भयो त विवादित ?
इ सेवाले दिने अफरको नतिजा निकाल्दा भिभिन्न भाडोमा राखिएको बल झिक्ने गरिन्छ। प्रत्येक बलमा नम्बर लेखिएको हुन्छ । भिन्न भाँडोबाट निकालिएको बल संगै राख्दा जुन नम्बर आउछ , त्यहि नम्बर बिजेता भएको घोषणा गरिन्छ । स्मरण रहोस् यस्ता अफरहरुमा एकदम थोरैको संख्यामा मात्र उपभोक्ता सहभागी हुने गर्छन् । त्यसैले झिकेर निकालिएको नम्बर उपभोक्तालाइ पर्ने अनुपात एकदम नुन्य रहन्छ । त्यसमाथि पनि बुधबार, इसेवा को नतिजा हेरेरै निकालिएको पोल खुलेपछि इसेवा विवादमा तानिएको हो ।
अफरको नतिजा निकाल्न नंदिराज पाण्डेलाइ बोलाईएको थियो । तर उनले नम्बर अंकित बल हेरेरै निकालेपछि इसेवा विवादित बनेको हो । अर्थात इसेवाले कसलाई उपहार दिने भनेर पहिला नै तोकी बिजेता घोषणा गरिएको भन्दै सामाजिक संजाल तातेको छ । यद्यपी इसेवाले भने नम्बर हेरेर ननिकालिएको दाबी गरेको छ । हेर्नुहोस् विवादित बनेको भिडियो :
प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०७८, बिहीबार August 26, 2021
एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक मध्यान्ह १२ बजे बस्दै
आठ करोड लगानीमा कर्णालीकै पहिलो जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सुरु, स्थानीय भए खुसी
लिटरमै १० रुपैयाँले बढ्यो पेट्रोल र डिजेलको मूल्य, ग्यासको भाउ कति ?